Malunga ne-US | Indawo
Ukusekwa ngo-2010 Iimveliso zethu zibandakanya amatyala efowuni ye-waterproof kunye neengxowa zendawo ezichasene namanzi okanye amanzi anqabileyo, iingxowa ze-backproost Cooler, iingxowa zebhayisikile. Iingxowa ze-cargo ze-balgoof, iingxowa zamanzi ezinamanzi, ichibi lebhafu lokuhlambela kunye nangaphezulu.
Iimveliso zethu zikhonza abathengi bamazwe angaphezu kwama-60 nakwimimandla, ngakumbi i-USA. IYurophu, iJapan kunye neMexico njl njl njl imidlalo ibonwa yiAmazon njengomthengisi weAmazon, kwaye iqinisekisiwe yi-BSCI. I-Disney ye-OCC, nangaphezulu.
Ngeenzame eziqhubekayo ze r&Iqela elinikezelwe ekuphuhliseni itekhnoloji yeTekhnoloji yamanzi. Sifuna ukufaka izinto ezintsha. Vula intsebenziswano. kwaye iphele ekuphelisweni komgangatho osemgangathweni kuyo yonke inkampani yethu nakwinkqubo yemveliso. Sityala imali e-r&D Njengoko sizabalazela ukuba yinkokeli yegiya ephathekayo kwaye isebenze ukhula kunye nokuyila iimveliso ezintsha zezobugcisa. ngaphezulu kwe-5% yengeniso iyonke ityale imali kwi r&D yedwa. Kwaye siyaqhubeka nokuphuhlisa itekhnoloji entsha kunye nokuphucula umgangatho weemveliso zemidlalo yendawo.
Injongo yethu kukwanelisa abathengi bethu ngokuchaneka okuphezulu kunye nokuthenjwa ukuqinisekisa ukuba wonke umthengi unokuziva ekhululekile kwaye eqinisekile ngempahla yethu kwizicelo zethu.
Sizimisele ukuvelisa ezona mveliso zibalaseleyo kwezona zincinci zikhuphisanayo. Ke ngoko, simema ngokunyaniseka zonke iinkampani ezinomdla ukuba zinxibelelane nathi ngolwazi oluthe kratya.
Idilesi yenkampani: Isakhiwo 5, Hesheng Drivelid Park, Yongfu Play, I-Bao'ase yeSithili, Shenzhen 518103, China